ISudan, izwe lokuqala elingenakuhlalwa ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
ISudan, izwe lokuqala elingenakuhlalwa ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu
ISudan, elinye lamazwe ampofu kakhulu e-Afrika nasemhlabeni, ingagcina ingasakwazi ukuhlala ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu. Lapha, lapho kuhlala khona abantu abangaphezu kwezigidi ezingama-40, izinga lokushisa lizokhuphukela kuma-degree amathathu centigrade kokuncane kakhulu: unyaka ka-2060 ngokwe-CNN.
Uma izibikezelo zakho zigcwaliseka ekugcineni, kuzokwenza impilo ingabi khona esifundeni esivele sibhekene nogwadule olunamandla neziphepho ezinamandla zothuli.
ISudan, izwe elisogwini loLwandle Olubomvu eNyakatho Afrika, lisendaweni lapho, noma kuphi lapho ubheka khona, uzothola khona ugwadule kuphela. Kuseningizimu kuphela lapho kune-savanna. Futhi, izinga lokushisa liphakeme kakhulu: I-42ºC yeqiwa kalula cishe nsuku zonkeNgakho-ke, ukwanda kwamadigri amathathu ngaphezulu kungasho ukuphela kwempilo kule ngxenye yomhlaba, ngesizathu esilula sokuthi izidalwa eziningi eziphilayo azikwazi ukuthwala izinga lokushisa elingama-45ºC, nangaphansi nsuku zonke.
Umzimba womuntu one-40 degrees Celsius ungalimala kakhulu ebuchosheni nasekufeni. Yize ngamunye wethu enomkhawulo wakhe oshisayo, ongaba banzi noma ucishe ububanzi ngokuya ngaphezu kwakho konke ukuthi sihlale isikhathi eside kangakanani, izinga lokushisa elihle lokuphila liphakathi kuka-21 no-26ºC. Cishe uhhafu walokho okulindelekile eSudan ngonyaka ka-2060.
Futhi isimo siya ngokuya siba nzima ngenxa ye- izivunguvungu zesihlabathi, noma "haboob", okuyizinto okuthi, yize zifana nezindawo ezomile, zakha kakhulu kaningi kwezinye izingxenye zezwe njengoba iplanethi ifudumala.
Ngokombiko we-UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Abantu abayizigidi ezingu-4,6 abanakho ukudla, kanti ezinye izigidi eziyi-3,2 kungenzeka zingakwazi ukuthola amanzi esikhathini esifushane.
Ungafunda i-athikili ye-CNN lapha (KungesiNgisi).
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » ISudan, izwe lokuqala elingenakuhlalwa ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu
Izinga lokushisa e-Antarctica lingakhuphuka ngama-degree angama-6 ngasekupheleni kwekhulu leminyaka